Ukubambisana Okubanjelwe e-Dubai | Ungaqala kanjani ukwenza imali?
Ukubambisana Okubanjelwe e-Dubai
Abakwa-US Abaphothulile Kungasheshe Bashaqe Isikweletu Sabo Abafundi Ngokusebenza E-Dubai
Kwangathi 27, 2019
Izindlela ze-5 I-Expo2020 izoqinisa umnotho we-Dubai
Kwangathi 28, 2019
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at Kwangathi 28, 2019
Ibhizinisi le-Blogger e-Dubai
Ukubloga Okuhambisanayo ku Dubai kuyamangaza indlela yokwenza imali online. Noma kunjalo, ukuqala nokuzama ukwenza imali kuyethusa. Izibalo kuma-blogger aqala futhi ahluleke ngisho nokuthuka! Izindaba ezimnandi ukuthi akudingeki uthathe amathuba - wena can ube blogger ephumelelayo uma usebenzisa izindlela ezivivinyayo nezamaqiniso!
Thatha isikhathi eside, ubukeka kanzima kulezi zibuyekezo, ngoba enye yalezi ziqondiso is ithikithi lakho kwinkululeko yezezimali ngokusebenzisa ukubloga. Awunayo ukuqala 'enye nje ibhulogi'. Ungaqala a blog lokho uthola traffic futhi kwenza yokuthengisa kwesokunxele bese kwesokudla.
Kunzima ukungabi nentshisekelo ku-Marketing Affiliate Marketing. Okungaba ngcono kunokuthengisa umkhiqizo, ukukhokhelwa, futhi kungafanele ukuphatha ukugcwaliseka kwe-oda noma yini enye? Kuyindlela enhle yokwenza imali, futhi lapho uhlanganisa ukumaketha okuhambisanayo nokubhuloga imiphumela ayimeleki.
I-Blogger Enkulu Yobambiswano iyincwadi ebhulogi ekusetshenzisweni kwayo, kepha kuthatha i-slant ehlukile kunezinye izincwadi esizihlolile. Lokhu kukusiza ukuthi uqalise ukubloga njengabo abanye, kepha gxila kakhulu ukumaketha okuhambisana nakho kuhlukanisa lokhu.
Setha ibhulogi yakho (ulwazi oluyisisekelo noluthuthukile luhlanganisiwe)
Sebenzisa amagama angukhiye futhi usebenzise Amasu we-SEO
Thuthukisa okuthunyelwe kwakho futhi udale iziqu eziphoqelela
Sebenzisa ukuxhumana okuxhumanisayo futhi ezinye izindlela zokushayela ithrafikhi
Manje, lezo yizinto ozothola ezincwadini eziningi ezitshela ukuthi ungaqala kanjani ngokubhuloga. Iqukethe nesigaba esikhulu kakhulu kokujoyina. Konke odinga ukukwazi kumbozwe ukuthi yikuphi ukumaketha okuhambelana nakho kumasu athuthukile.
Indlela Yokuqala Ukubambisana Okubambisana e-Dubai?
Ungaqala Kanjani Ukubhloga kwe-Blogging eDubai?
Lolu lwazi lumangalisa ngempela, kepha luyenzeka kuholele emiqondweni esezingeni eliphezulu kakhulu - ngokushesha okukhulu. Ngenkathi ingxenye enkulu yencwadi igxile kumasu alula, isheshe iphendukele ezintweni ezinjengokusetha i-funnel ehambelana nayo, egcwalisa nge-Pay Per Click kanye namakhasi wokufika.
Lokhu akufanele kube yinkinga nhlobo kubantu abaye benza lokhu okwesikhashana, kodwa labo abasha bayobe becindezeleka kakhulu. Akudingeki nje kuphela funda ukuthi ungabloga kanjani usebenzisa leli qhinga, kodwa futhi kudingeka bafunde ukuthi bangayibhala kanjani ikhasi lokufika, babone ibhokisi labo lokuphuma, bese uthola ithuba ku-PPC, phakathi kwezinye izinto.
Njengoba kushiwo, lesi sigaba sibaluleke kakhulu kubantu abakulungele. AmaNewbies angakwazi ukukubekezelela ngokubekezela okuthile, kepha abanye bangase bakhungatheke.
Ukufinyelela ku-Google Traffic
Ukuhambisa eduze nomgwaqo - Siyithanda ngempela le ngxenye! Kuhambe ngokuningiliziwe ngokusebenzisa ama-RSS feeds nokuwathumela kuya kwezinkomba kunanoma yisiphi esinye isiqondisi esisibukezile kuze kube manje. Le yinto enhle ngoba ama-rankings ku-Intanethi nezindlela ezinhle kakhulu zokuthola ithrafikhi zihlala zishintsha. Okwamanje kulo mdlalo, ulwazi mayelana nokuphakelwa kwe-RSS lubalulekile.
Le phakethe iza namabhonasi athile lokho kusiza kakhulu ukwenza kube kuphelele. Okokuqala, kunohlu lwamakhodi azokusiza uthuthukise ibhulogi yakho. Lokhu kumele-ube nakho. Kulula ukusebenzisa, kepha hhayi abantu abaningi kakhulu. Lokho kuzokunika inzuzo enkulu ngaphezu komncintiswano.
I-Blogger ehambisanayo ingukukhetha ukunga-minder uma inhloso yakho eyinhloko iwukuba nobulungu obuphakeme ukudonsa imali enkulu. Uma ungafuni ukwakha amakhasi okufika, yakha uhlu, njll. Ungafuna ukuhamba nomkhiqizo ohlukile. Uma ufuna ukulandela ezinyathelweni zabathengisi abaxhumene nababhali abaphumelele, awukwazi ngempela ukungahambi kahle ngalo mkhiqizo.
Ngo-Shahbaz Khan Badil (Pakistan)
Dubai City Inkampani manje ihlinzeka ngemikhombandlela emihle Imisebenzi eDubai. Ithimba lethu lathatha isinqumo sokungeza imininingwane yolimi ngalunye Imisebenzi e-Dubai Guides. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje ungathola izinkomba, amathiphu nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.